ရှေးဟောင်းအီဂျစ် တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး လူ အများစု အမြင်မှားနေကြတဲ့ အချက်များ - Shwe Khit Online TV
[ October 25, 2021 ] ကမ္ဘာ့အလှဆုံးနဲ့ အချောဆုံးအဖြစ် သက်မှတ်ခံထားရတဲ့ အမျိုးသမီး (၁၀) ဦး	Entertainment
[ October 24, 2021 ] ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းခွင်ထဲက စိတ်ပျက်စရာ အလွဲများ	Fun
[ October 22, 2021 ] မမျှော်လင့်ပဲ ရှာတွေ့ခဲ့ကြတဲ့ သဘာ၀တရားကြီးထဲက ထူးထူးဆန်းဆန်း အရာများ	Amazing
[ October 21, 2021 ] မုန့်ပဲသရေစာ စားတဲ့သူတွေ ရရှိနိုင်မယ့် ကောင်းကျိုး ( ၅ ) ချက်	Knowledge
[ October 20, 2021 ] တစ်ကယ့် အစစ်အမှန် ဟုတ်ရဲ့လားဆိုတာ ယုံရခက်သွား စေမယ့် ပုံများ	Fun
HomeAmazingရှေးဟောင်းအီဂျစ် တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး လူ အများစု အမြင်မှားနေကြတဲ့ အချက်များ
ရှေးဟောင်းအီဂျစ် တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး လူ အများစု အမြင်မှားနေကြတဲ့ အချက်များ
September 16, 2021 Yan Amazing, Knowledge 0
ပရိသတ်ကြီးကို အခုတစ်ခါ ပြောပြပေးချင်တဲ့ အကြောင်းအရာကတော့ ရှေးဟောင်းအီဂျစ် တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး လူ အများစု အမြင်မှားနေကြတဲ့ အချက်များအကြောင်း ပြောပြပေးမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ လူ တော်တော်များများ က ရှေးဟောင်း အီဂျစ် လူမျိုးတွေ အပေါ် သိထားကြတဲ့ အချက်တွေထဲမှာ ဘယ်အရာတွေက မှားနေကြလဲ ဆိုတာကိုတော့ အောက်ကပုံလေးတွေ တစ်ပုံချင်းစီကို ကြည့်လိုက်ပါဦးနော် …. shwekhitonlinetv.com
၁ ။ ကယ်လီယို ပက်ထရာ ရဲ့ ရုပ် အမှန်
ကယ်လီယို ပက်ထရာ ဘုရင်မကြီးကတော့ ကမ္ဘာမှာ အထင်ရှားဆုံး အီဂျစ် အမျိုးသမီးတစ်ယောက် ဖြစ်တဲ့ အပြင် သူမရဲ့ အလှတရားကြောင်လည်း နာမည်ကျော်ကြားခဲ့သူ တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် ကယ်လီယို ဘုရင်မ ဟာ သူမရဲ့ ပြည့်စုံလှတဲ့ အသွင်အပြင်ကို ထုတ်မပြနိုင်ခဲ့ပါဘူး ။ အကြောင်းကတော့ သူမ အသက်ရှင်နေတုန်းက ဖန်တီးခဲ့တဲ့ ပုံတူ ပန်းချီကားတွေကို နှောင်းလူတွေက စံနမူနာ အဖြစ် သတ်မှတ်လိုက်ကြလို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ shwekhitonlinetv.com
သမိုင်းပညာရှင်တွေရဲ့ ခန့်မှန်းမှုအရ သူမဟာ ငယ်ရွယ်ပြီး ယောကျာ်း ဆန်ဆန် အသွင်အပြင်ရှိကာ နှာခေါင်းက တော့ သွယ်တဲ့ နှာခေါင်းပုံစံမျိုး ရှိတယ်လို့ ခန့်မှန်းထားကြပါတယ် ။ တစ်ချို့ ပညာရှင်တွေကတော့ သူမရဲ့ ပုံစံဟာ ခန္ဓာကိုယ် အချိုးအစား ပြေပြစ်ပြီး မိန်းမဆန်တဲ့ အသွင်အပြင်ရှိတယ်လို့လည်း ဆိုကြပါတယ် ။ ဒီလိုမျိုး မတူကွဲပြားတဲ့ အမြင်တွေ ရှိနေပေမယ့်လည်း သမိုင်းမှာ နာမည်ကြီးခဲ့တဲ့ ကယ်လီယို ဘုရင်မကြီးဟာ သူမရဲ့ ဆွဲဆောင်နိုင်စွမ်း ၊ ထက်မြက်ပုံ နဲ့ စကားပြော စွမ်းရည်တွေက လူတွေ အကြား ပိုပြီး နာမည်ကြီးလာစေတဲ့ အချက်ကိုတော့ ပညာရှင် အတော်များများက လက်ခံထားကြပါတယ် ။ shwekhitonlinetv.com
၂ ။ ပိရမစ်ထဲက ထောင်ချောက် တွေ နဲ့ ရတနာများ
ပိရမစ်ကို တည်ဆောက်ခဲ့ကြသူတွေဟာ သူတို့ရဲ့ ဂူသချိုင်းတွေကို ကာကွယ်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့ကြတာ မှန်ပေမယ့်လည်း ရုပ်ရှင်တွေထဲမှာ ပါတဲ့ ဇာတ်လမ်းတွေထဲကလိုမျိုး အရမ်းကြီးတော့ စိတ်ကူးဉာဏ် မကွန့်မြူးကြပါဘူး ။ ဥပမာ အနေနဲ့ ပြောရမယ်ဆိုရင် တစ်ကယ့် အပြင်မှာတော့ ရှေးခေတ် အီဂျစ်လူမျိုးတွေဟာ ပိရမစ်တွေကို တည်ဆောက်တဲ့အခါ ဖောက်ထွင်း လုယူသူတွေ ဝေခွဲမရ ဖြစ်အောင် အခန်း အစစ်ရဲ့ ဘေးမှာမှ နောက်ထပ် အခန်းတု တစ်ခု ထားပြီး ဆောက်ခဲ့တာမျိုးပါ ။ shwekhitonlinetv.com
နောက်ပြီး ဒီပိရမစ်ထဲမှာ ရေတွင်း အနက်ကြီးတွေ တူးပြီး ဖောက်ထွင်းတဲ့သူက တစ်ယောက်ထဲ ဆိုရင် အလွယ်တကူ ထွက်လို့မရအောင် စီစဉ်ထားတာမျိုးတွေပဲ လုပ်ခဲ့တာပါ ။ ရတနာတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြောရမယ်ဆိုရင် ပိရမစ် အနည်းငယ်လောက်ထဲမှာသာ ရှေးဟောင်း လက်ဝတ်ရတနာတွေကို တူးဖော်တွေ့ရှိခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး အများစုကတော့ သမိုင်းအမွေအနှစ် အရ အဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ ရှေးဟောင်း ပစ္စည်းတစ်ချို့ပဲ ရှာတွေ့ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ် ။ shwekhitonlinetv.com
၃ ။ စဖင့်ရုပ်တုတွေဟာ နှာခေါင်းမရှိပါဘူး ။
စဖင့်ရုပ်တုတွေဟာ ဂီဇာပိရမစ်တွေလိုမျိုး နာမည်ကြီး ထင်ရှားတဲ့ အထဲမှာ ပါဝင်ပြီး ဒီရုပ်တုတွေထဲမှာ ဘာကြောင့် နှာခေါင်း မရှိကြလဲဆိုတဲ့ အချက်ကို လူတော်တော်များများ တွေးခဲ့ကြပါတယ် ။ ဒီအထဲမှာမှ အများစု ထင်ကြတဲ့ အချက်ကတော့ တစ်ချိန်က နာမည်ကြီးခဲ့တဲ့ နပိုလီယန် ရဲ့ စစ်တပ်ဟာ သေနတ်ပစ်လေ့ကျင့်တဲ့ အခါ စဖင့် ရုပ်တုတွေရဲ့ နှာခေါင်းကို ပစ်မှတ်ထားပြီး လေ့ကျင့်ခဲ့ကြတာကြောင့် ဖြစ်တယ်ဆိုတာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ shwekhitonlinetv.com
တစ်ကယ်တမ်းမှာတော့ စဖင့် ရုပ်တုတွေမှာ နှာခေါင်းမပါရှိတော့တဲ့ အချိန်ဟာ ( ၁၇၅၅ ) ခုနှစ် ကတည်းက ဖြစ်ပြီး နပိုလီယံ ကို မွေးဖွားခဲ့တာက ( ၁၇၆၉ ) ခုနှစ် မှာမှ မွေးဖွားခဲ့တာပါ ။ ဒါ့ကြောင့် နပိုလီယန် စစ်တပ်ဟာ စဖင့်ရုပ်တုတွေရဲ့ နှာခေါင်းကို ပစ်မှတ်ထားပြီး သေနတ်ပစ်လေ့ကျင့်ခဲ့ကြတယ်ဆိုတာ မှားနေတဲ့ အချက်လို့ ပြောရမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ နောက်ပြီး စဖင့် ရုပ်တုတွေမှာ ဘာကြောင့် နှာခေါင်း မပါရလဲဆိုတဲ့ အချက်ဟာ လက်ရှိအချိန်အထိ ပညာရှင်တွေ အတွက် မဖြေရှင်းနိုင်သေးတဲ့ ပဟေဠိ တစ်ခု အဖြစ် ရှိလို့နေပါတယ် ။ shwekhitonlinetv.com
၄ ။ ဖာရို ဘုရင်တွေရဲ့ ကျိန်စာများ
ဖာရိုဘုရင်တွေရဲ့ ကျိန်စာ နဲ့ ပတ်သက်ပြီး လူတွေ ပြောကြတဲ့ ဒဏ္ဍာရီကတော့ တူတန်ခမန် ဘုရင်ရဲ့ အုတ်ဂူကို ဖွင့်တဲ့ အခါ ဒီ ကျိန်စာတွေ ပေါ်လာမယ်ဆိုတာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ သမိုင်းမှတ်တမ်းတွေထဲမှာတော့ တစ်ချို့သော ရှေးဟောင်းသုတေသန ပညာရှင် တွေဟာ တူတန်ခမန် ဘုရင်ရဲ့ ရှေးဟောင်းအုတ်ဂူကို ဖွင့်ပြီး သေဆုံး သွားကြတယ်လို့ ပြောကြပါတယ် ။ ဒါ့ကြောင့်ပဲ လူတော်တော်များများက ရှေးဟောင်းကျိန်စာတွေ တစ်ကယ်ရှိတယ်လို့ ယုံကြည်ခဲ့ကြပါတယ် ။ shwekhitonlinetv.com
တစ်ချို့သူတွေကတော့ တူးဖော်ခဲ့တဲ့ ပညာရှင် တစ်ချို့ သေဆုံးရခြင်းဟာ ဖာရို ဘုရင်တွေ ရဲ့ ကျိန်စာ နဲ့ မဆိုင်ပဲ ရှင်းပြလို့ မရတဲ့ တစ်ခြား အကြောင်းရင်း ကြောင့်‌ ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ ပြောကြတာလည်း ရှိပါတယ် ။ ဒါပေမယ့်လည်း ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးတဲ့ ဒါရိုက်တာတွေကတော့ ရှေးဟောင်း ဖာရို ဘုရင်တွေရဲ့ ကျိန်စာတွေက တစ်ကယ်ရှိတယ်ဆိုတဲ့ အချက်ကို ပိုပြီး သဘောကျကြတာကြောင့် ရှေးဟောင်း အီဂျစ်တွေ နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ရုပ်ရှင်တွေ အကြောင်း ရိုက်ကူးတဲ့အခါ ဒီအချက်ကို ထည့်ပြီး ရိုက်ကူးလေ့ရှိကြပါတယ် ။ shwekhitonlinetv.com
၅ ။ ပိရမစ်တွေကို အမှန်တစ်ကယ် ဆောက်လုပ်ခဲ့ကြသူများ
အခု နောက်ဆုံး အနေနဲ့ ပြောပြပေးချင်တဲ့ အချက်ကတော့ ဖာရို ဘုရင်တွေ ရဲ့ ပိရမစ်တွေကို ဘယ်သူတွေ ပါဝင် တည်ဆောက်ပေးခဲ့တာလဲ ဆိုတဲ့ အချက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ ရှေးဟောင်း ဖာရို ဘုရင်တွေဟာ သူတို့ မရှိတော့တဲ့ အချိန်ကျရင် သူတို့ရဲ့ ကြီးကြယ် ခမ်းနားမှုတွေကို သမိုင်းစာမျက်နှာမှာ ထင်ကျန်စေဖို့အတွက် ပိရမစ်တွေကို တည်ဆောက်ခဲ့ကြပါတယ် ။ ဒီနေရာမှာ လူအတော် များများ ထင်ကြတာက အခုလိုမျိုး ကြီးမားတဲ့ ပိရမစ်ကြီးတွေကို တည်ဆောက်ဖို့အတွက် ကျွန်လုပ်သား အများအပြားကို အသုံးပြုရလိမ့်မယ်လို့ ထင်ကြတာပါ ။ shwekhitonlinetv.com
တစ်ကယ်တော့ ဒီလိုထင်ထားတာတွေဟာ မှားနေတယ်လို့ပဲ ပြောရမှာပါ ။ အကြောင်းကတော့ ရှေးဟောင်းသုတေသန ပညာရှင်တွေရဲ့ လေ့လာ တွေ့ရှိချက်အရ ပိရမစ်တွေရဲ့ အနီးနား တစ်ဝိုက်မှာ အထူးဂုဏ်ပြုခြင်းခံရပြီး မြုပ်နှံပေးထားတဲ့ အုတ်ဂူတစ်ချို့ကို ရှာတွေ့ခဲ့ပါတယ် ။ ဒါကို ဆက်လက်ပြီး လေ့လာကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ အခုလိုမျိုး ဂုဏ်ပြုပြီး မြုပ်နှံခံရတဲ့ လူတွေဟာ ပိရမစ်တွေကို အချိန်အကြာကြီး တည်ဆောက်တဲ့ နေရာမှာ ပါဝင်ခဲ့ကြပြီး မတူညီတဲ့ ဆောက်လုပ်ရေး နယ်ပယ် အသီးသီးက လစာယူပြီး အလုပ် လုပ်ပေးတဲ့သူတွေ ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ ခန့်မှန်းခဲ့ကြပါတယ် ။ shwekhitonlinetv.com
အခုဖော်ပြပေးထားတာကတော့ ရှေးဟောင်း အီဂျစ် တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး လူတွေ အမြင်မှားနေတဲ့ အချက်တစ်ချို့ကို ပြောပြပေးထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ နောက်ပိုင်းတွေမှာလည်း အခုလိုမျိုး စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ အကြောင်းအရာလေးတွေကို ရှာဖွေတင်ဆက်ပေးမှာမို့လို့ Shwe Khit ကို စောင့်မျှော်ဖတ်ရှုပေးကြပါဦးနော် …. shwekhitonlinetv.com
ထူးဆန်းလွန်းတဲ့ နေရာတွေမှာ ဖန်တီးတည်ဆောက်ထားတဲ့ မြို့ (၅) မြို့
အရိုးစုတွေ ကို နည်းပညာသုံးပြီး ပုံဖော်ထားတဲ့ ရှေးခေတ်က လူသားတွေရဲ့ ပုံစံများ
ကမ္ဘာ့အလှဆုံးနဲ့ အချောဆုံးအဖြစ် သက်မှတ်ခံထားရတဲ့ အမျိုးသမီး (၁၀) ဦး
ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းခွင်ထဲက စိတ်ပျက်စရာ အလွဲများ
မမျှော်လင့်ပဲ ရှာတွေ့ခဲ့ကြတဲ့ သဘာ၀တရားကြီးထဲက ထူးထူးဆန်းဆန်း အရာများ
မုန့်ပဲသရေစာ စားတဲ့သူတွေ ရရှိနိုင်မယ့် ကောင်းကျိုး ( ၅ ) ချက်
တစ်ကယ့် အစစ်အမှန် ဟုတ်ရဲ့လားဆိုတာ ယုံရခက်သွား စေမယ့် ပုံများ
ကမ္ဘာပေါ်က အန္တရာယ်အရှိဆုံး လေဆိပ်များ